ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး အဘိုးအို ကွယ်လွန် | Hintharmedia
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး အဘိုးအို ကွယ်လွန်
TOPSHOT - Masazo Nonaka of Japan (R), aged 112, receivesacertificate for the Guinness World Records' oldest male person living title from Erika Ogawa (L), vice president of Guinness World Records Japan, in Ashoro, Hokkaido prefecture on April 10, 2018. Nonaka was born on July 25, 1905. / AFP PHOTO / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT (Photo credit should read JIJI PRESS/AFP/Getty Images)
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအဖြစ် ဂရင်းနစ်စံချိန်တင်ထား သည့် အသက် ၁၁၃ နှစ်အရွယ် ဂျပန်အဘိုးအို မာဆာဇို နိုနာကာသည် ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခင် ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး စံချိန်တင်ထားသည့် စပိန်နိုင်ငံသား ဖရန်စ္စကို နူနက်ဇ် အိုလီဗာရာ ၂ဝ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ယခု ဂျပန်အဘိုးအိုကို ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအဖြစ် လွန်ခဲ့ သောနှစ် ဧပြီလက ဂရင်းနစ်စံချိန်တင် စာရင်းသွင်းထားခဲ့သည်။
နိုနာကာကို ၁၉ဝ၅ ဇူလိုင်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဟိုကိုင်ဒိုကျွန်းတွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်ကြောင်း သိရသည်။ နိုနာကာသည် မိသားစုအတွက် တာဝန်ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခွင့် ရရှိခဲ့သည့်အတွက် အဘိုးဖြစ်သူ နိုနာကာအပေါ် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မြေးဖြစ်သူ ယုကိုက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် အဘိုးနိုနာကာအား လွန်စွာ လွမ်းဆွတ်မိပါကြောင်း၊ အဘိုး၏နောက်ဆုံးအချိန်များကို မိသားစု နှင့်အတူတကွ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး ဂုဏ်ရှိစွာ သေဆုံးခဲ့ရခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း မြေးဖြစ်သူ ယုကိုက ပြောခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် နိုနာကာ အသက် ရှူရပ်သွားသည်ကို သူ၏ မိသားစုဝင်များက သတိပြုမိခဲ့ သည်ဟု မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။ ထို့နောက် နိုနာကာ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဆရာဝန်က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်ထိတိုင် နိုနာကာသည် ကျန်းမာရေး ကောင်းလျက်ရှိသည်ဟု မိသားစုဝင်များက ဆိုသည်။
နိုနာကာသည် ဟိုကိုင်ဒိုကျွန်းအရှေ့ဘက်ရှိ မီယာကန်တောင်ပေါ်တွင် ရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး (အမျိုးသား) အဖြစ် ဂရင်းနစ်စံချိန်တင်ထားသူမှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သော အသက် ၁၁၆ နှစ် ၅၄ ရက် အရွယ်ရှိ အဘိုးအို ဂျီရိုမွန်ကီမုရာ(Jiroemon Kimura) ဖြစ်သည်။
ဂရင်းနစ်မှတ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး(လူသား)အဖြစ် စံချိန်တင်ထားသူမှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အသက် ၁၂၂ နှစ် ၁၆၄ ရက်ဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ပြင်သစ် အဘွားအို ဂျင်နီကောမန်း(Jeanne Calment) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးဘီလူးကျွန်း ကျေးရွာများ အမှိုက်စွန့်ပစ်မည့်နေရာနှင့် အမှိုက်သိမ်းစနစ် မရှိသေး
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးမက္ကဆီကိုနယ်စပ်တံတိုင်း ကာရံခွင့် ရလျှင် ဒုက္ခသည်များကို ပြည်နှင်ဒဏ်မပေးတော့ဟု အမေရိကန်သမ္မတ ပြော